Izinjongo Zamathuluzi Okuzenzekelayo Nemizamo Yokumaketha | Martech Zone
Izinjongo Zamathuluzi we-Automation Nemizamo Yokumaketha
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 22, i-2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 22, i-2016 Douglas Karr
Kunemikhuba ethile embonini yezentengiso yedijithali esiyibonayo esivele iba nomthelela kuzabelomali nezinsizakusebenza - futhi ezoqhubeka nakusasa.
Ngokombono wokutshalwa kwezimali, izabelomali zokumaketha izinsizakalo zizokhula kancane ngo-2016, ziye cishe ku-1.5% wemali ephelele yemisebenzi. Ukwanda kuzosala ekukhuleni okulindelekile emalini engenayo yezinsizakalo, noma kunjalo, ukufaka ingcindezi ethe xaxa kubakhangisi ukuze bandise ububanzi nokusebenza ngezinsizakusebenza ezingeziwe kuphela. Umthombo: ITSMA
Ngamafuphi, izabelomali zokumakethwa kwedijithali ziyaqhubeka nokukhula kanti nabathengisi abasemazingeni we-C manje kulindeleke ukuthi babambisane futhi baqonde ngokuphelele ubunzima bendawo, amathuluzi atholakalayo, kanye nokubika okudingekayo ukuthuthukisa imizamo yenkampani yokuthola nokugcina. Njengoba kunikezwe ukuqhuma kweziteshi kanye nesidingo sokwandisa eziningi kangaka, Senza okuningi ngokuncane… futhi kuya ngokuya kuba nzima.
Nakuba Izisebenzi zokumaketha ziyanda, okulindelwe ukuthi abathengisi benze okuningi ngokuncane kuyaqhubeka. Futhi ingcindezi enkulu ukufaka imali kumathuluzi wokumaketha asiza ukunciphisa inani lamahora abantu adingekayo ukuphendula, ukuhlela, ukwenza nokukala imizamo yokukhangisa.
I-Automation ne-Intelligence Incoma Abasebenzi, Abawafaki
I-ejensi yethu yenza umsebenzi omncane ezinkampanini ezithile ezinkulu kakhulu. Nganoma yisiphi isikhathi sosuku, mhlawumbe sinezinsiza eziyi-18 noma ezinikele ezisebenza emsebenzini wamakhasimende. Kusuka kongoti bomkhiqizo, kubaphathi bephrojekthi, kubaklami, konjiniyela, kubabhali bokuqukethwe… uhlu luqhubeka luqhubeke njalo njalo. Iningi lalo msebenzi lifezwa ngokubambisana nezinye izinhlangano, noma kunjalo. Sakha isu futhi basebenzise isu.
Amathuluzi ayindlela eyodwa yokuthi sikwazi ukwandisa amaphuzu okuthinta namakhasimende namathemba. Sisebenzisa iqoqo ledeshibhodi, yokubika, yokushicilela komphakathi, kanye namathuluzi wokuphatha iphrojekthi. Umgomo walawo mathuluzi akuyona into ezenzakalelayo yemisebenzi yethu, noma kunjalo. Inhloso yalawo mathuluzi ukukhulisa isikhathi esisisebenzisa thina mathupha neklayenti ngalinye ukuze sichaze futhi sisebenzise amasu esiwabekayo.
Njengoba ubheke ukutshala isabelomali sokwenza imisebenzi yangaphakathi ngokuzenzakalela, ngizoqinisekisa ukuthi inhloso yakho akukhona ukufaka abantu esikhundleni, kuwukubakhulula ukuze benze okuhle kakhulu kubo. Uma ufuna ukonakalisa umkhiqizo weqembu lakho lokumaketha - qhubeka ubenze basebenze kuma-spreadsheet ne-imeyili. Uma ufuna ukukhulisa umkhiqizo, yenza ukuthengwa kwamathuluzi kube yinto eza kuqala ukuze iqembu lakho likwazi ukuthola konke elikudingayo ukuze liphumelele.
Ekugcineni, i umgomo wanoma yiluphi uhlelo oluhlobene nokumaketha kufanele kube ukuthi inika amandla isikhathi esikhiqiza kakhulu ngamathemba akho namakhasimende, hhayi ngaphansi. Khiqiza okuningi kumakhasimende akho futhi uzozuza. Ezinye izibonelo:
Sisebenzisa I-Wordsmith Yokumaketha ukuhlunga phansi nokwethula idatha ye-Google Analytics ngendlela amaklayenti ethu angayiqonda kangcono. Lokho kusenza sikwazi ukuxhumana nezitayela futhi sinikeze isu lokuthuthuka kunokuchitha isikhathi uzama ukuchaza analytics idatha.
Sisebenzisa g Shift ukuqapha imithombo yezokuxhumana nomthelela wokusesha komunye nomunye nakulayini waphansi. Isimangalo Kunzima, noma kungenzeki, ngaphandle kwethuluzi elifana ne-gShift. Uma ungalinganisi imiphumela yecebo lakho lokuqukethwe ngokunembile, uzoba nesikhathi esinzima sokuchaza ukuthi kungani iklayenti lakho kufanele liqhubeke nokutshala imali kulo.
SisebenzisaI-Hootsuite, isikhumbulo sesikhana, Futhi Jetpack ukuphatha imizamo yethu yokushicilela komphakathi. Ngenkathi siyiqembu elincane, senza umsindo omkhulu ku-Intanethi. Ngokuchitha isikhathi esincane ekushicileleni, ngiyakwazi ukuchitha isikhathi esiningi ngixhumana nezithameli zami zokuxhumana.
Elinye lalawa mathuluzi lisenza sikwazi ukugxila emizamweni yethu lapho kudingeka khona kunokusebenza emisebenzini evamile amaklayenti ethu angaze ayazise. Bafuna imiphumela - futhi kudingeka sisebenzele kuyo!
Tags: Ama-Analyticsizinhloso ezishintshayoamathuluzi ezenzakalelayomarketingukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukubika
Ama-Searchmetrics: Ipulatifomu ye-SEO yebhizinisi, enedatha
Ngo-Apr 27, i-2016 ku-9: 28 AM
Phakathi kwamanye amathuluzi wokumaketha edijithali iGoole Analytics iyona esakazeke kakhulu futhi esetshenziswayo. Yimiphi imikhuba yakho emihle yokusetshenziswa kwe-Google Analytics kumongo wokuthengisa / wokukhula kwemali engenayo?
Jabulela usuku lwakho!
Ngo-Apr 27, i-2016 ku-12: i-50 PM
Lokho kuncike kwiklayenti, kepha imvamisa sifuna ukudala imingcele yokuguqula ebuyela emuva kusuka kunoma iyiphi i-Call-To-Action ize iye lapho isivakashi singena khona kusayithi. Futhi imibiko yangokwezifiso ibalulekile ukunciphisa ukudideka kwamakhasimende.